21 maalmood caadooyinku waxay sii wadaan waxqabadyo dhammaad dhammaystiran
Caadadii 21-ka maalmood ahayd ee lagu beeri jiray adkeysiga ayaa si rasmi ah u dhammaatay. Noloshu waa ciyaar iskiis ah. Kaliya kuwa ku dhiiranaya inay naftooda garaacaan ayaa fursad u yeelan kara inay ka sarreeyaan naftooda oo ay ku guuleystaan ​​guusha ugu dambeysa! Waxaan u hambalyeynayaa horyaalkeena Christine iyo Cesca, wax walba waa n ...
Aqoontu waa awood, tikniyoolajiyad heer sare ah oo mustaqbalka lagu abuuro
Galab isbuucaan, seddex shaqaale cusub oo shaqaaleysiinta iibka ganacsiga ah si ay ula socdaan daraasadda Aqbalaada Warshadda, midkoodna seddexda cusubi weligood lama kulmin warshadaha mashiinada, fursadda ay kubaranayaan wajiga mashiinka, way firfircoonyihiin oo waxay qaadayaan dadaalka .. ..
Ku soo dhowow barnaamijka tooska ah ee tooska ah ee saxaafadda kiniinka.
Xilliga gu'ga, cimiladu way diiran tahay, isla waqtigaas, waxaan rajeynayaa inaan ku kululeyn karno. Ku soo dhawow barnaamijka tooska ah ee tooska ah ee saxaafadda kiniinka. Waqtiga ： Mar.12,2012 Daawo cinwaanka ： fcebook ： https: //lnkd.in/eG_wZEi alibaba ： aligned.en.alibaba.com Website ： www.aligned-tec ...
Xaflada dhaarinta sanadka cusub
Waxaan dejinay hadafyo cusub sanadka cusub, waxaana ku dadaali doonaa inaan dhameystirno himilooyinka！
Dareenka-firfircoon 2020 Shirka sanadlaha ah ee SAAMAYN
Diiwaanka Waxqabadka Kirismaska
Kirismaska ​​qof walboo sugaya xaflada, taas oo waliba macnaheedu yahay in sanadka cusub uu imanayo. Waxaan xirnaa calaamadda xafladda waxay u taagan tahay midabka dharka, xirashada astaanta astaanta ah ee xiisaha leh, ciyaarista codka, codka fudud ee macaan, billowga cajiibka ah ee maalinteenna. Bo ...
Markii uu dillaacay adduunka ee COVID-19, bandhigga CPHI ee Shiinaha waxaa loo qabtay sidii loo qorsheeyay. Injineeradayaga ilaa qaabka goobta, ilaa shaqaalaheena iibka inay kaqeyb galaan bandhiga, wax walbo si habsami leh ayey udhaceen. Aad ayaad u mahadsan tihiin imaatinka goobta si aad noo taageertaan. ...
Isku toosan ayaa kugu martiqaadaya inaad booqato CPHI Shiinaha 2020
Bisha Diseembar 16-18, 2020, "20-ka Dawladood ee alaabta ceyriinka dawooyinka ee Shiinaha Bandhigga" (CPhI China 2020) waxay gacmaha isula qabsan doontaa "Mashiinka Daawooyinka Daawooyinka Adduunka ee shan iyo tobnaad, Qalabka Baakadaha iyo Qalabka Shiinaha" (P-MEC China). Sii wad safarka sharafta leh ...
Bandhigga 2019 ee Sacuudi Carabiya